Bible—Sua Nyankopɔn Asɛm na Nya Nyansa | Bɛn Yehowa
TI 5 Adebɔ Tumi—“Ɔsoro ne Asase Yɛfo”
TI 6 Tumi a Ɛsɛe Ade—‘Yehowa Yɛ Ɔdɔmmarima’
TI 7 Tumi a Ɛbɔ Nneɛma Ho Ban—“Onyankopɔn Yɛ Yɛn Guankɔbea”
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Baoule Bengali Bicol Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Haitian Creole Hausa Hiligaynon Hindi Hungarian Iloko Indonesian Italian Japanese Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kisonge Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Macedonian Malagasy Malayalam Maltese Myanmar Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Niuean Norwegian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Rarotongan Romanian Russian Sango Sepedi Serbian Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tamil Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uruund Venda Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Nyansa Wɔ ‘Onyankopɔn Asɛm’ Mu
1, 2. “Krataa” bɛn na Yehowa akyerɛw yɛn, na dɛn ntia?
SO WOKAE da a wo nsa kaa krataa fii wo dɔfo bi a ɔwɔ akyirikyiri hɔ? Nneɛma kakraa bi pɛ na ɛma yenya anigye kɛse sɛ krataa a ɛka koma a obi a yɛdɔ no de brɛ yɛn no. Ɛyɛ yɛn anigye sɛ yɛbɛte sɛnea ne ho te, ne suahu, ne ne nhyehyɛe ho asɛm. Sɛ yɛn adɔfo wɔ akyirikyiri mpo a, nkitahodi a ɛte saa ma yɛbɛn wɔn.
2 Ɛnde, dɛn na ebetumi ama yɛanya anigye kɛse asen krataa a yebenya afi Onyankopɔn a yɛdɔ no no hɔ? Ɔkwan bi so no, Yehowa akyerɛw yɛn “krataa”—N’asɛm Bible no. Ɔka sɛnea ɔte, nea wayɛ, nea wabɔ ne tirim sɛ ɔbɛyɛ, ne nea ɛkeka ho ho asɛm kyerɛ yɛn wɔ mu. Esiane sɛ Yehowa pɛ sɛ yɛbɛn no nti, ɔde N’asɛm ama yɛn. Yɛn Nyankopɔn a onim nyansa sen biara no paw ɔkwan a eye sen biara a obetumi afa so ne yɛn adi nkitaho. Nyansa a ɛso bi nni wɔ ɔkwan a wɔfaa so kyerɛw Bible no ne emu nsɛm no mu.
Dɛn Nti na Wɔkyerɛw Nsɛm No?
3. Ɔkwan bɛn na Yehowa faa so de ne Mmara no maa Mose?
3 Ebia ebinom bɛka sɛ, ‘Dɛn nti na Yehowa amfa anwonwakwan so—sɛ ebia, ɛnne a efi soro so—ne nnipa anni nkitaho?’ Nokwarem no, mmere bi wɔ hɔ a Yehowa nam abɔfo a wɔyɛ n’ananmusifo so fi soro kasae. Sɛ nhwɛso no, ɔyɛɛ saa bere a ɔde Mmara no maa Israel no. (Galatifo 3:19) Ná ɛnne a efi soro no yɛ hu yiye—na ɛyɛ hu araa ma Israelfo a na wɔabɔ hu no kae sɛ mma Yehowa ne wɔn nnkasa wɔ saa kwan yi so na mmom ɔmfa Mose so ne wɔn nkasa. (Exodus 20:18-20) Enti wɔde ano na ɛkaa Mmara a na ɛbɛyɛ 600 no kyerɛɛ Mose.
4. Kyerɛkyerɛ nea enti a anka nsɛm a wɔde ano ka renyɛ ɔkwan a ahotoso wom a wɔbɛfa so de Onyankopɔn mmara ama no mu.
4 Nanso, sɛ wɔankyerɛw Mmara no a anka dɛn na ɛbɛba? So anka Mose betumi akae mmara no mu nsɛm no pɛpɛɛpɛ a mfomso biara nnim akyerɛ ɔmanfo no? Na awo ntoatoaso a wɔbaa akyiri yi no nso ɛ? So na ɛsɛ sɛ wɔde wɔn ho to nsɛm a wɔde ano ka so? Anka ɛno renyɛ ɔkwan a wotumi de ho to so a wɔnam so de Onyankopɔn mmara ma. Fa no sɛ ɛsɛ sɛ woka asɛm bi kyerɛ nnipa a wɔato santen tenteenten denam asɛm no a woka kyerɛ nea odi kan no so na ɔno nso ka kyerɛ nea odi hɔ no, na wɔyɛ no saa ara kosi nea otwa to koraa no so. Ɛda adi sɛ nea onii a odi akyiri paa no tee no bɛyɛ soronko kakra afi asɛm no ankasa ho. Na asiane a ɛte saa biara nni Onyankopɔn Mmara nsɛm no ho.
5, 6. Dɛn na Yehowa kae sɛ Mose nyɛ Ne nsɛm no, na dɛn nti na ɛyɛ nhyira sɛ yɛanya Yehowa Asɛm a wɔakyerɛw no?
5 Yehowa fi nyansam ma wɔkyerɛw ne nsɛm no too hɔ. Ɔka kyerɛɛ Mose sɛ: “Kyerɛw nsɛm yi fa, efisɛ nsɛm yi so na migyina me ne wo ne Israelfo no apam.” (Exodus 34:27) Saa na wofii Bible kyerɛw ase wɔ afe 1513 A.Y.B. mu. Mfirihyia 1,610 a edii hɔ no, Yehowa ‘nam mmere horow ne su horow so kasa kyerɛɛ’ akyerɛwfo a wɔyɛ nnipa bɛyɛ 40 no, ma wɔkyerɛw Bible no. (Hebrifo 1:1) Eduu bere bi no, wɔn a wɔhwɛ nsɛm so kyerɛw bi a wɔwɔ ahofama no de ahwɛyiye kyerɛw bi pɛpɛɛpɛ sɛnea ɛbɛyɛ a wɔbɛkora Kyerɛwnsɛm no so.—Esra 7:6; Dwom 45:1.
6 Yehowa nam nkitaho a ɔne yɛn dii denam akyerɛw so no so ahyira yɛn ankasa. So woanya krataa bi a w’ani gyee ho yiye pɛn—ebia esiane awerɛkyekye a wuhia a ɛma wunyae nti—na wode siei na wosan kan no mpɛn pii? Saa na Yehowa “krataa” a wakyerɛw yɛn no te. Esiane sɛ Yehowa ma wɔkyerɛw ne nsɛm no nti, yetumi kenkan daa susuw emu nsɛm no ho. (Dwom 1:2) Yɛn nsa betumi aka “kyerɛw nsɛm no mu awerɛkyekye” bere biara a yehia.—Romafo 15:4.
Dɛn Nti na Ɔmaa Nnipa Kyerɛwee?
7. Ɔkwan bɛn so na yehu Yehowa nyansa wɔ nnipa a ɔde wɔn dii dwuma sɛ akyerɛwfo no mu?
7 Yehowa fi ne nyansa mu maa nnipa kyerɛw N’asɛm no. Susuw eyi ho hwɛ: Sɛ Yehowa maa abɔfo kyerɛw Bible no a, so anka yebenya ho anigye koro no ara? Nokwarem no, anka abɔfo no betumi afi wɔn adwene a ɛkorɔn no mu na aka Yehowa ho asɛm, aka sɛnea wɔsom no, na wɔaka Onyankopɔn asomfo anokwafo a wɔyɛ nnipa no ho asɛm. So anka yebetumi ate honhom abɔde a wɔyɛ pɛ na wɔn nimdeɛ, wɔn suahu, ne wɔn ahoɔden boro yɛn de so koraa no nsusuwii no ase ankasa?—Hebrifo 2:6, 7.
“Kyerɛwnsɛm no nyinaa fi Onyankopɔn honhom mu”
8. Ɔkwan bɛn so na wɔmaa Bible akyerɛwfo no de wɔn ankasa nyansa dii dwuma? (Hwɛ ase hɔ asɛm no nso.)
8 Yehowa nam nnipa akyerɛwfo a ɔde wɔn dii dwuma no so maa yɛn nsa kaa nea yehia ankasa—kyerɛwtohɔ a ‘efi Onyankopɔn home mu’ na emu nsɛm no ye ma nnipa. (2 Timoteo 3:16) Ɔkwan bɛn so na ɔyɛɛ eyi? Wɔ nsɛm pii mu no, ɔmaa nnipa no ankasa de wɔn nyansa dii dwuma paw “nsɛm a ɛyɛ dɛ, na nea wɔakyerɛw no ne trenee ne nokware nsɛm.” (Ɔsɛnkafo 12:10, 11) Eyi kyerɛkyerɛ nea enti a ɔkwan a wɔfaa so kyerɛw Bible no gu ahorow no mu; nkyerɛwee no ka abusua a akyerɛwfo no biara fi mu ne ntetee a wonyae ne wɔn nipasu ho asɛm. * Nanso, ‘sɛnea honhom kronkron de saa mmarima yi rekɔ no na wɔkasae.’ (2 Petro 1:21) Enti, nea efii mu bae no yɛ “Onyankopɔn asɛm” ankasa.—1 Tesalonikafo 2:13.
9, 10. Dɛn nti na nnipa a wɔde wɔn dii dwuma ma wɔkyerɛw Bible no ma emu nsɛm yɛ anigye kɛse?
9 Nnipa a wɔde wɔn dii dwuma ma wɔkyerɛw Bible no ma ɛyɛ anigye. Ná akyerɛwfo no yɛ nnipa a wɔwɔ nkate te sɛ yɛn ara. Esiane sɛ wɔnyɛ pɛ nti, wohyiaa sɔhwɛ ne nhyɛso ahorow te sɛ yɛn de yi ara. Wɔ nsɛm bi mu no, Yehowa honhom kaa wɔn ma wɔkyerɛw wɔn ankasa nkate ne wɔn amanehunu ho asɛm. (2 Korintofo 12:7-10) Enti wɔkyerɛw nsɛm no sɛ wɔn ankasa nsɛm, nsɛm a anka ɔbɔfo biara ntumi nka.
10 Fa Israel hene Dawid sɛ nhwɛso. Bere a Dawid yɛɛ bɔne a anibere wom akyi no, ɔhyehyɛɛ dwom bi a ɔkaa ne komam asɛm wom, na ɔsrɛɛ Onyankopɔn hɔ bɔne fafiri. Ɔkyerɛwee sɛ: “Hohoro me ho fi m’amumɔyɛ mu koraa, na prapra me ho fi me bɔne mu. Na me mmarato no, mahu, na me bɔne wɔ m’anim daa yi. Hwɛ, wɔwoo me amumɔyɛ mu, na bɔne mu na me nã nyinsɛn me. Ntow me mfi w’anim nkyene, na nyi wo honhom kronkron mfi me so. Onyankopɔn afɔre ne honhom a abubu; Onyankopɔn, koma a abubu na apɛtɛw na worempo.” (Dwom 51:2, 3, 5, 11, 17) So wuntumi nhu ɛyaw a ɔkyerɛwfo no di no? Hena na obetumi ada nkate a ɛtete saa adi, so ɛnyɛ onipa a ɔnyɛ pɛ?
Dɛn Nti na Ɛyɛ Nhoma a Ɛka Nnipa Ho Nsɛm?
11. Asetram nsɛm a esisii ankasa bɛn na wɔde aka Bible no ho ‘ama yɛn kyerɛkyerɛ’?
11 Biribi foforo wɔ hɔ a ɛboa ma Bible mu nsɛm yɛ anigye. Ɛyɛ nhoma a ɛka nnipa ho nsɛm kɛse—nnipa ankasa—wɔn a wɔsom Onyankopɔn ne wɔn a wɔnsom no. Yɛkenkan wɔn suahu, wɔn amanehunu, ne wɔn anigye ho nsɛm. Yehu nea efii nneɛma a wɔpawee wɔ asetram mu bae no. Wɔde nsɛm a ɛtete saa no kaa ho ‘maa yɛn kyerɛkyerɛ.’ (Romafo 15:4) Yehowa nam saa asetram nsɛm ho nkyerɛkyerɛmu yi so kyerɛkyerɛ wɔ akwan a ɛka yɛn koma so. Susuw nhwɛso ahorow bi ho hwɛ.
12. Bible mu nsɛm a ɛfa nnipa a wɔanni nokware ho no boa yɛn ɔkwan bɛn so?
12 Bible ka nnipa a wɔanni nokware, amumɔyɛfo mpo, ne nea ɛtoo wɔn ho asɛm. Wɔ saa kyerɛwtohɔ yi mu no, yehu subammɔne a wɔdaa no adi no, na ɛma ɛyɛ mmerɛw sɛ yɛbɛte ase. Sɛ nhwɛso no, mmara a etia nkontompo bɛn na ebetumi aka yɛn kɛse asen Yuda de no, bere a na ɔredi Yesu ho nkɔnkɔnsa no? (Mateo 26:14-16, 46-50; 27:3-10) Nsɛm a ɛtete sɛ eyi ka yɛn koma yiye, na ɛboa yɛn ma yehu su ahorow a ɛmfata na yɛpo.
13. Ɔkwan bɛn so na Bible no boa yɛn ma yɛte su pa horow ase?
13 Bible ka Onyankopɔn asomfo anokwafo pii ho asɛm nso. Yɛkenkan wɔn ahofama ne wɔn nokwaredi ho asɛm. Yehu su ahorow a ɛsɛ sɛ yenya na ama yɛatumi abɛn Onyankopɔn ho nhwɛso ahorow ankasa. Fa gyidi sɛ nhwɛso. Bible kyerɛkyerɛ gyidi mu, na ɛka sɛnea ɛho hia na ama yɛatumi asɔ Onyankopɔn ani ho asɛm kyerɛ yɛn. (Hebrifo 11:1, 6) Gyidi a wɔdaa no adi fann ho nhwɛso ahorow nso wɔ Bible mu. Susuw gyidi a Abraham daa no adi bere a ɔyɛe sɛ ɔde Isak rebɔ afɔre no ho hwɛ. (Genesis, ti 22; Hebrifo 11:17-19) Yɛnam kyerɛwtohɔ a ɛtete saa so nya “gyidi” asɛm no ho ntease foforo, na ɛma ɛyɛ mmerɛw sɛ yɛbɛte ase. Hwɛ sɛnea nyansa wom sɛ ɛnyɛ afotu kɛkɛ na Yehowa de ma yɛn sɛnea ɛbɛyɛ a yebenya su pa, na mmom ɔma yɛn ho nhwɛso ahorow nso!
14, 15. Dɛn na Bible no ka fa ɔbea bi a ɔbaa asɔrefie hɔ ho kyerɛ yɛn, na dɛn na yesua fa Yehowa ho wɔ kyerɛwtohɔ yi mu?
14 Asetra mu osuahu ho kyerɛwtohɔ a ɛwɔ Bible mu no taa kyerɛkyerɛ yɛn biribi fa onipa kõ a Yehowa yɛ ho. Susuw nea yɛkenkan faa ɔbea bi a Yesu huu no asɔrefie hɔ ho no ho hwɛ. Bere a na Yesu te bɛn tow adaka no ho no, na ɔrehwɛ nkurɔfo a wɔde wɔn ntoboa regu mu no. Adefo pii bae “fi nea wɔwɔ na abu wɔn so no mu” bɛmaa bi. Nanso, Yesu gyen n’ani hwɛɛ okunafo hiani bi. Ná n’ayɛyɛde no yɛ “ntaapo abien a ɛbɛyɛ ɔban.” * Na ɛyɛ dwetɛ sika ketewaa a aka a ɔwɔ. Yesu a ɔdaa Yehowa adwene a ɔwɔ wɔ nneɛma ho adi pɛpɛɛpɛ no kae sɛ: “Okunafo hiani yi de nea ɛdɔɔso abegu mu sen wɔn a wɔde bi beguu tow adaka no mu nyinaa.” Sɛnea saa nsɛm no kyerɛ no, nea ɔde guu mu no dɔɔso kyɛn afoforo a aka nyinaa de a wɔde guu mu a wɔaka abom.—Marko 12:41-44; Luka 21:1-4; Yohane 8:28.
15 So ɛnyɛ nea ɛho hia sɛ nnipa a wɔbaa asɔrefie hɔ saa da no nyinaa mu no, woyii okunafo yi kaa ne ho asɛm wɔ Bible mu? Yehowa nam saa nhwɛso yi so kyerɛkyerɛe sɛ ɔyɛ Onyankopɔn a ɔkyerɛ anisɔ. N’ani gye ho sɛ obegye yɛn ayɛyɛde a efi ɔkra nyinaa mu, ɛmfa ho nea sɛ wɔde toto afoforo de ho a ɛte biara no. Ɔkwan pa foforo biara nni hɔ a ɛsen eyi a Yehowa betumi afa so akyerɛ yɛn nokwasɛm yi!
Ade a Enni Bible no Mu
16, 17. Ɔkwan bɛn so na yehu Yehowa nyansa wɔ nneɛma a ɔnka ho asɛm wɔ N’asɛm mu no mpo mu?
16 Sɛ wokyerɛw krataa kɔma wo dɔfo bi a, ɛnyɛ biribiara na wubetumi aka ho asɛm wɔ mu. Enti wode anidahɔ paw nsɛm a wobɛkyerɛw no. Saa ara na Yehowa kaa nnipa bi ne nsɛm bi a esisii ho asɛm wɔ N’asɛm mu. Nanso, wɔ kyerɛwtohɔ a ɛkyerɛkyerɛ nneɛma mu yi mu no, Bible no nkyerɛkyerɛ biribiara mu fefeefe bere nyinaa. (Yohane 21:25) Sɛ nhwɛso no, bere a Bible ka Onyankopɔn atemmu ho asɛm no, ebia ɛho nsɛm a ɛka no ntumi mmua yɛn asɛmmisa biara. Yehu Yehowa nyansa wɔ nneɛma a ɔnka ho asɛm wɔ N’asɛm mu no mpo mu. Ɔkwan bɛn so?
17 Ɔkwan a wɔfaa so kyerɛw Bible no sɔ nea ɛwɔ yɛn komam no hwɛ. Hebrifo 4:12 ka sɛ: “Onyankopɔn asɛm [anaa, nkrasɛm] wɔ nkwa, na ahoɔden wɔ mu, na ano yɛ nnam sen nkrante anofanu biara, na ehwirew mu kodu sɛ ɛpaapae ɔkra ne honhom . . . mu, na ɛyɛ koma nsusuwii ne adwene temmufo.” Bible mu nkrasɛm no hwirew yɛn mu, na ɛda yɛn nsusuwii ne adwene a yekura ankasa adi. Kyerɛwtohɔ a ɛnkyerɛkyerɛ nneɛma mu nkɔ akyiri no taa to wɔn a wɔde komaden kenkan na wonnya nea wɔpɛ no hintidua. Nnipa a wɔte saa no betumi agye Yehowa dɔ, nyansa, ne atɛntrenee ankasa a obu no ho kyim mpo.
18, 19. (a) Sɛ Bible mu asɛm pɔtee bi ma nsɛmmisa a yentumi nnya ho mmuae amonom hɔ ara sɔre a, dɛn nti na ɛnsɛ sɛ ɛhaw yɛn? (b) Dɛn na yehia na ama yɛate Onyankopɔn Asɛm ase, na ɔkwan bɛn so na eyi yɛ Yehowa nyansa kɛse no ho adanse?
18 Nea ɛne no bɔ abira no, sɛ yɛde koma pa sua Bible no yiye a, yebehu Yehowa sɛnea Bible mũ no nyinaa ka ne ho asɛm no. Enti, sɛ kyerɛwtohɔ pɔtee bi ma nsɛmmisa bi a yentumi nnya ho mmuae amonom hɔ ara sɔre a, ɛnhaw yɛn. Sɛ yɛbɛyɛ mfatoho a: Sɛ yɛrekeka biribi asisi anim de ayɛ biribi mfonini a, ebia mfiase no yentumi nhu esin pɔtee bi anaasɛ yentumi nhu sɛnea esin bi bɛhyɛ beae bi ma ayɛ yiye. Nanso, ebia na yɛadi kan ahyehyɛ pii a ɛbɛma yɛahu sɛnea mfonini no bɛyɛ no ani so. Saa ara na sɛ yesua Bible no a, yɛde nkakrankakra hu Onyankopɔn kõ a Yehowa yɛ, na yetumi hu no yiye. Sɛ mfiase no na yentumi nte kyerɛwsɛm bi ase anaa yenhu sɛnea ɛne Onyankopɔn nipasu hyia a, Bible no a yɛasua no ama yɛahu Yehowa ho nsɛm pii dedaw a ebetumi ama yɛahu sɛ Onyankopɔn dɔ ne n’atɛntrenee nni huammɔ da.
19 Enti sɛ yɛbɛte Onyankopɔn Asɛm ase a, ɛsɛ sɛ yɛde koma pa ne adwenemtew kenkan na yesua. So eyi nyɛ Yehowa nyansa kɛse no ho adanse? Nnipa a wɔwɔ nimdeɛ tumi kyerɛw nhoma a “anyansafo ne animdefo” nkutoo na wotumi te ase. Nanso, Onyankopɔn nyansa na wɔde bɛkyerɛw nhoma bi a gye wɔn a wɔwɔ koma pa nkutoo na wobetumi ate ase!—Mateo 11:25.
Nhoma a Ekura “Nyansahu”
20. Dɛn nti na Yehowa nkutoo na obetumi akyerɛ yɛn ɔkwan a eye sen biara a yebetumi afa so atra ase, na dɛn na ɛwɔ Bible mu a ebetumi aboa yɛn?
20 Yehowa ka ɔkwan a eye sen biara a yebetumi afa so atra ase ho asɛm kyerɛ yɛn wɔ N’asɛm mu. Sɛ́ Ɔbɔadeɛ no, onim yɛn ahiade sen yɛn ankasa. Na nnipa ahiade titiriw—a nea ɛka ho bi ne ɔpɛ a yɛwɔ sɛ wobeyi ɔdɔ adi akyerɛ yɛn, anigye a yebenya, ne abusuabɔ pa a yebenya—yɛ ade koro. “Nyansahu” pii wɔ Bible mu a ebetumi aboa yɛn ma yɛanya asetra a mfaso wɔ so. (Mmebusɛm 2:7) Ti bi wɔ adesua nhoma yi fã biara mu a ɛkyerɛ sɛnea yebetumi de Bible mu afotu a nyansa wom adi dwuma, nanso ma yensusuw nhwɛso biako ho wɔ ha.
21-23. Afotu a nyansa wom bɛn na ebetumi aboa yɛn ma yɛakwati abufuw a yɛde bɛhyɛ yɛn mu ne menasepɔw?
21 So woahyɛ no nsow sɛ nnipa a wɔde nsɛm hyɛ wɔn mu na wonya afoforo ho menasepɔw no taa pira wɔn ho? Menasepɔw yɛ ade a emu yɛ duru sɛ obi bɛsoa wɔ asetram. Sɛ yɛma ɛtra yɛn mu a, egye yɛn adwene, ɛsɛe yɛn asomdwoe, na ɛka yɛn anigye hyɛ. Nhwehwɛmu a nyansahufo ayɛ ada no adi sɛ sɛ obi kɔ so de abufuw hyɛ ne mu a, ebetumi ama wanya komayare ne nyarewa foforo pii a enni sabea. Bere tenten ansa na wɔreyɛ nyansahu mu nhwehwɛmu a ɛte saa no, na Bible no aka no nyansam sɛ: “Ma abufuw ntwa, na gyae bo bɔne yɛ.” (Dwom 37:8) Nanso, yɛbɛyɛ dɛn atumi ayɛ saa?
22 Onyankopɔn Asɛm de afotu a nyansa wom yi ma sɛ: “Onipa [nhumu, NW] twentwɛn n’abufuw ase, na mfomso ho twa yɛ no anuonyam.” (Mmebusɛm 19:11) Nhumu ne tumi a wotumi hu asɛm bi mu tra aniani kɛkɛ. Nhumu ma yenya ntease, efisɛ etumi boa yɛn ma yehu nea enti a onipa bi kasa anaasɛ ɔyɛ n’ade ɔkwan bi so. Mmɔden a yɛbɛbɔ ate adwene a obi kura, ne nkate, ne ne nsɛm tebea horow ase no betumi aboa yɛn ma yɛayi ne ho adwemmɔne ne atenka bɔne afi yɛn mu.
23 Afotu foforo yi wɔ Bible mu: “Munhuhu mma mo ho na momfa nkyekyɛ mo ho.” (Kolosefo 3:13) Asɛm “munhuhu mma mo ho” no kyerɛ afoforo ho abotare a yebenya, na yɛanya wɔn su ahorow a ɛhaw yɛn ho koma. Boasetɔ a ɛte saa betumi aboa yɛn ma yɛakwati sɛ yɛde nsɛm nketenkete ho abufuw bɛhyɛ yɛn mu. ‘Fa kyɛ’ twe adwene si bɔne a yɛremfa nhyɛ yɛn mu so. Yɛn Nyankopɔn nyansafo no nim sɛ ehia sɛ yɛde afoforo bɔne kyɛ wɔn bere a yɛwɔ nnyinasosɛm a ɛfata sɛ yegyina so yɛ saa no. Ɛnyɛ wɔn nkutoo na wobenya eyi so mfaso na mmom ɛbɛma yɛn ankasa nso anya asomdwoe ne abotɔyam. (Luka 17:3, 4) Nyansa bɛn na ɛwɔ Onyankopɔn Asɛm mu sɛɛ yi!
24. Sɛ yɛma yɛn asetra ne Onyankopɔn nyansa hyia a, dɛn na ɛba?
24 Yehowa dɔ a enni ano no kaa no ma ɔpɛe sɛ ɔne yɛn di nkitaho. Ɔpaw ɔkwan a ɛfata sen biara—“krataa” a nnipa akyerɛwfo a honhom kronkron kyerɛ wɔn kwan kyerɛwee. Ne saa nti, yehu Yehowa ankasa nyansa wɔ krataa no mu. Nyansa yi yɛ “nokware.” (Dwom 93:5) Bere a yɛma yɛn abrabɔ ne no hyia, na yɛka ho asɛm kyerɛ afoforo no, na yɛrebɛn yɛn Nyankopɔn a onim nyansa sen biara no. Wɔ ti a edi hɔ mu no, yebesusuw Yehowa nyansa a ɛkɔ akyiri ho nhwɛso foforo a ɛda nsow ho: tumi a otumi ka nea ɛbɛba daakye ho asɛm sie ne n’atirimpɔw a otumi ma ɛbam no.
^ nky. 8 Sɛ nhwɛso no, Dawid a na ɔyɛ oguanhwɛfo no de oguanhwɛfo asetram suahu na ɛmaa nhwɛso ahorow. (Dwom 23) Mateo a na ɔyɛ towgyeni no de akontaahyɛde ne sika dodow dii dwuma mpɛn pii. (Mateo 17:27; 26:15; 27:3) Ná Luka yɛ oduruyɛfo, na ɔde nsɛm a ɛfa nnuru ho dii dwuma.—Luka 4:38; 14:2; 16:20.
^ nky. 14 Ná saa ntaapo yi biako yɛ lepton, Yudafo dwetɛ sika a na esua sen biara a na wodi saa bere no. Ná lepton abien yɛ da koro akatua mu 1/64. Na saa dwetɛ sika yi nnɔɔso sɛ ebetumi atɔ akasanoma biako, anomaa a na ne bo yɛ fo koraa a na ahiafo di no.
Mmebusɛm 2:1-6 Mmɔden bɛn na ɛsɛ sɛ yɛbɔ na ama yɛanya Onyankopɔn Asɛm mu nyansa?
Mmebusɛm 2:10-22 Akwan bɛn so na yebenya yɛn asetra a yɛbɛma ɛne Bible mu afotu a nyansa wom ahyia no so mfaso?
Romafo 7:15-25 Ɔkwan bɛn so na kyerɛwsɛm yi kyerɛkyerɛ nyansa a ɛwom sɛ wɔmaa nnipa kyerɛw Onyankopɔn Asɛm no mu?
1 Korintofo 10:6-12 Dɛn na yebetumi asua afi kɔkɔbɔ ho nhwɛso a ɛwɔ Bible mu a ɛfa Israel ho no mu?
Sɛ yɛpɛ sɛ yenya Bible so mfaso a, gye sɛ yesua na yɛde ne nkyerɛkyerɛ yɛ adwuma. Hwɛ nea wubetumi ayɛ ma woanya Bible akenkan so mfaso.
Dɛn Nti na Yehowa Adansefo Ayɛ Wiase Foforo Nkyerɛase No?
Dɛn na ɛma Onyankopɔn Asɛm a wɔakyerɛ ase yi yɛ soronko wɔ nkyerɛase afoforo ho?